Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo booqday dhaawacyadii qaraxyadii Muqdisho. (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo booqday dhaawacyadii qaraxyadii Muqdisho. (Sawirro)
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo booqday dhaawacyadii qaraxyadii Muqdisho. (Sawirro)
February 24, 2018 admin544
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa xalay saqdii dhexe ku booqday isbitaallada lagu dabiibayo dhaawacyadii ka dhashay qaraxyadii ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Sawirro: Banaanbax looga soo horjeedo heshiiska Galmudug iyo Ahlu sunna oo Cadaado ka dhacay
Dhageyso: Al-Shabaab oo baahisay magaca iyo beesha uu u dhashay ninkii fuliyay weerarkii Hotel SYL